‘रुद्रप्रिया’ लाई कसको याद आयो त घरी घरी ? « Ramailo छ
‘रुद्रप्रिया’ लाई कसको याद आयो त घरी घरी ?
कात्तिक २ गतेदेखि देशभरबाट प्रदर्शनमा आउने रेखा थापा र आर्यन सिग्देल स्टारर फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ को लिरिकल सङ्ग रिलिज भएको छ । सार्वजनिक घरि घरि आउँछ तिम्रो याद बोलको गीतमा शब्द तथा संगीत सुरेश अधिकारी स्वर बानिका प्रधानको रहेको छ । रेखा थापाको लिप्सिङ रहेको लिरिकल भिडियो हेर्नुस् :
सुदिप बबी भूपाल सिंह निर्देशित फिल्म रुद्रप्रिया मा रेखा थापा र आर्यन सिग्देलसँगै राजन इशान, टिका पहारी लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । सरस्वती थापा र रमेश एमके पौडेल निर्माता रहेको फिल्मलाई संजय लामाले खिचेका हुन् । सार्वजनिक लिरिकल भिडियोलाई भने हिमग्यापलामा टासीले खिचेका छन् । रेखा र आर्यनले झण्डै ८ वर्षपछि एकसाथ स्क्रिन सेयर गरेका हुन् ।